Cajal, Web Design Dikkate Alınması Talaaba SEO Dirlerini Açıklar
Website-yo horumarin ah oo ku dhisan guri ku dhisan; Zayıf bir temel varsa o zaman istikrarlı olmayacaktır. Ku dhex jirtaa si aad u hesho, qaar ka mid ah aasaasiga waa in la sameeyo. Shabakadaha internetka ee aasaasiga ah, raadinta raadinta optimization (SEO).
In kasta oo aan dib u cusbooneysiineyno ama dib u cusbooneysiin, websaytka horumarinta, markaas SEO waa in la fahmo. Shaqee sabab:
> size waqtiga kazandıracak
> size ayaa ka saraysa meelaynta gunta
> balaadhan oo dheeraad ah oo ka gaabinaya kazandıracak, sidoo kale aad u badan kazan kazanılacaktır
Bu avantajları yararlanmanıza yardımcı olmak için, Semalt'in , Customer Configuration Manager Ivan Konovalov, oo ah shirkad website-ka ah oo horumarinaysa iyo tas-hiilaadaha u baahan inaad u baahan tahay SEO scores - rastreador de pedidos sedex.
1. Bogga mimarisi iyo link oluşturma
Guri isku dhafan adoo isticmaalaya, waa mid ka mid ah qaybta qaybtii uu ogaan lahaa. Tusaale ahaan, waxaad ka heleysaa qalab, waraaqo, waraaqo, shaqooyin, dabaasha, iyo liistada. Halkaas waa inay ahaato mid la abuuro si ay u shaqeyso. Halkaan waxaad ka heleysaa boggaga internetka si aad u heshid - mantıklı bir şekilde dib-u-hagaajinta. Hadda, goobta mimarisi ay ku shaqeyso. Dhinaca kale, hal shabakad xiriiriye ah, boggaga internetka ee ku saabsan dhammaan bogaggooda ayaa la ogeysiinayaa.
Websaytkaaga oo kaliya waa inaad markasiga satmaktır. Qalabkeedu wuxuu u adeegayaa inuu caawimo u adeego. Halkaan waxaad ka heli kartaa alaabta, katalog ama aklaga wax kasta. Buuggan shabakadaha internetka ah ee hawlaha gaarka ah ee aad ka mid tahay. Sidaas awgeed, bogga internetka ee ku saabsan khibradaha iyo qaladaadka kale si aad u ogaatid. Si aad boggaaga u cusbooneysiiso, bogga cusub ee cusub ee ka midka ah 'dev' server ku ku xiran tahay. Asla canli deggaanku waa inaad ku dhaqaaqdaa. Kumanaan Dollar ayaa lumiyay kara.
4. Naqshadeynta macaamiisha
Boggaga interneetka ah waxaad ku xiran kartaa telefoonkaaga gacanta. Sidaas darteed, waa in aad sare u qaadatid. Halkaan ka fiirso, in labadaba boggaga internetka ee horumarinta ayaa ah in la sameeyo. Macmiilkaaga si tartiib ah bogsado web-kaasin acını çekin. Sheerarka iyo stil sayfalarını test etme yolunu bulun. Jahawareerka adigoonan ku dhicin. Buuggani internetka ayaa kaa caawin kara dhibaatada. Doğru Dönüşüm Oranı Optimiasyonu taktiği için zamanı ayırın. Xaqiijinta muujinta iyo qiyaasaha waa in aad ku hagaajisaa. Bogga Hore ee wargeyska wargeyska qarsoodiga ah
5. Hiz iyo user experience
Organic searches ku dhawaad ​​60% oo ah qalabka mobile-ka ah oo la sameeyey iyo weliba "mobile deviceslara uygun" a design içeriyor olması önemlidir. Tani, sawir gacmaheedana si tartiib ah ilaa ay wax walba dhici karto. Dhamaan website-yada oo dhan waxaad ka heleysaa meelo laga heli karo, o marka aad u socoto